Trenitalia Yakachipa YemaTeki Makikiti Uye Mitengo Yekufamba | Save A Train
mu 2005, ari Frecciarossa 1000, Trenitalia'samanga inononoka tambo yakatangwa. Iyo mhanyisa iyo Frecciarossa 1000 inosvika mazana matatu nemakumi matatu paawa.
Major International chitima nzira iri pakati peGeneva neMilan uye inotora 4 maawa akakwira Trenitalia.
Trenitalia inodzidzisa sevhisi iri mukuda kwazvo. Trenitalia Base train ticket can be exchanged and modified without limitation and Economy Standard ticket can only be modified once before the train departure date. You cannot exchange or refund the other Trenitalia tickets, asi pane maforamu pane internet kuti iwe unogona kutengesa Trenitalia tikiti yechipiri ruoko. Sevha Yekudzidziswa kwechitima ye Kufamba kweTrenitalia ndeyekubhuka kana iwe uine chokwadi nezve yako yekufamba nguva.
Mitengo yetikiti yeTrenitalia semuenzaniso inogona kutanga pa € ​​21 panguva yekusimudzira asi inogona kusvika € 97 paminiti yekupedzisira. Trenitalia matikiti emitengo zvinoenderana nekirasi yaunosarudza uye heino tafura yekupfupisa yemitengo yepakati yekirasi kune yeRoma-Naples / Rome – Milan / Milan – Florence nzendo dzinofamba:
1) Kubatsira kweTrenitalia zvitima kunotanga nenyaya yekuti iwe unogona kubva wosvika wakananga pakati peguta mune chero ripi remaguta aunofamba uchibva. Zvirokwazvo ichi chinhu chakasarudzika kwazvo kuzvitima, kunyanya kana iwe kudzidzisa kufamba kubva kuRoma, Milan, Florence, Geneva, kana Monaco, iyo inobatsira mukuru kuTrenitalia. Nekuda kweichi chokwadi chekuti rwendo rwakananga pakati peguta, iwe unodzivirira kuzviwisira mumigwagwa uye hapana chakaipisisa kupfuura kubatikana mumigwagwa uri kuzororo.
Kana zvasvika kuTrenitalia zvitiketi zvechitima pricing, mitengo inowanzosiyana kazhinji. Kumwe kusimudzira kunokutendera iwe kuti utore matikiti ezvitima akadhura, asi mukati memazuva ekupedzisira kusati kwaenda, mitengo iri kuwedzera saka kana uchida kufamba mushe, Trenitalia ndeyako!
Musiyano mukuru pakati peTrenitalia chitima chekirasi makirasi kusagadzikana kwekushandurwa kwetiketi, mitengo, uye masevhisi. Uyezve tikiti reEconomy chitima ndiyo yakachipa uye yakachinjika nzira yekufamba muItaly.
The Trenitalia Standard Ehupfumi chitima tikiti ndiyo yakachipa pane yese Trenitalia fares. Zvakanaka kubhuka iyi tiketi yemberi pamberi, nekuti base matikiti akaderera mutengo – vanotengesa nekukurumidza. Vafambi vanobata tikiti yepaTeki yechitima vanogona kutora masutukesi anokodzera munzvimbo yezvokutakura, zvemahara uye vanogona kukanzurisa tikiti ravo rechitima vasati vaenda uye vanogashira mari shoma (kubviswa mutero we 20%).
Kuwedzera kune zvakanakira Standard matikiti echitima, Trenitalia Economy Premium matiketi anopa vakanaka zvigaro vane yakawanda legroom uye kutsigiridza zvigaro parwendo rurefu. Pamusoro pazvose, pane matatu emamenyu ezvikafu aungasarudze uye chikafu chitsva uye zvinwiwa zvinozopihwa kuchigaro chako pane zvitima zveTrenitalia.
The Trenitalia Bhizinesi tikiti vatengi vanogona kunakidzwa nezvakanakira zvese zvatakanyora pamusoro zvakadaro, vafambi veTrenitalia Bhizinesi Premier vanobatsirwa nemabhegi mazhinji emikwende, yakagadzikana ergonomic ganda zvigaro, yakawedzerwa legroom, matatu emamenyu ekudya kusarudza kubva. Uyezve une madziro ehupfumi uye nzvimbo yekunyarara munzvimbo dzeBhizinesi dzakatarwa pazvitima zveTrenitalia.
Yayo Pass yekuItaly, asi zvinongokurudzirwa senzira isingadhuri kana iwe ukaronga kudzidzisa kufamba pamusoro 14 mazuva, kunyoreswa kunobvumira kuongorora Italy nechitima kune akapfuura chaiwo. Pane 3 pasiti inowanikwa: nyore, Comfort, uye Executive uye iwe unogona kusarudza huwandu hwenzendo dzinotangira kubva 3 kuti 10 uye sarudza mhando yechitima kubva yakakwira-kumhanya Frecce kuenda kuhukama uye EuroCity.
Trenitalia inovhara zvese zveItari, zvisinei zviteshi zvikuru zvenyika zviriko: Milan, Rome, Venice, Naples, Turin, Bologna, Geneva, Florence, uye Verona. Pane 11 zviteshi zvepasi rese: 5 Trenitalia zvitima zvezvitima muSwitzerland uye 6 nhepfenyuro muFrance uye mamwe mashoma muAustria neGerman neCroatia. Saka zviri pachena kuti unogona kufamba zvakanaka uye nekukurumidza kufamba nemuEuropean akanaka uye kuyemura maonero eItari pasina kana chinhu!
Naples terminal kumabvazuva kune Old guta. Kana iwe uri kuronga kugadzira zvimwe kusimuka-zuva kubva kuNaples kuna Pompeii kana Sorrento, ipapo iwe zvechokwadi uchamira paNaples chitima chiteshi chezendo rako rwechitima.
Zvakakosha zvakafanana kuzviunza iwe kuTrenitalia rwendo kwakakosha. Pamusoro payo ita shuwa kuti uve negwaro rako rekufamba reTrenitalia pafoni yako kana rakadhindwa uye pasipoti inoshanda ndeinofanirwa-kuva uye nguva dzose zvakanaka kuva neinishuwarenzi yekufamba.
Zvitima zveTrenitalia zvine yakasarudzwa pa-chitima cafe-bara yakatsaurirwa kune zvinwiwa uye chikafu chisina kujeka. Menyu inosanganisira masangweji, chocolate machipisi, nezvikafu zvishoma, chokoreti mabara, kofi, chokoreti inopisa, uye tii uye iwe unogona kudya uye kunwa muresitorendi iyi mota mota kana tora zvawakatenga back to your seat. Kana iwe uchifamba muBhizinesi, Premium, kana Yekutanga kirasi iwe unogona kusarudza yemahara yekugamuchira chinwiwa kubva pane sarudzo ye 9 zvinwiwa zviripo uye zvinotapira, nyama, or a gluten-free snack. On all Trenitalia trains, kune masimba slots padivi pechigaro chako.
Paunenge uchitenga Trenitalia matikiti pamberi, unogona kunakidzwa Yemahara WiFi internet on all Trenitalia frecciarossa type trains and classes.